I Manase dia mpanjakan' i Jodà izay nitondra tamin' ny taona 687 hatramin' ny taona 642 tal. J.K.
Ny vavaka sy ny fifonan'i Manase, taona 1904.
3 Boky amin' ny anarany
Amin' ny fiteny hebreo dia soratana hoe מְנַשֶּׁה‬ / Menasheh, amin' ny fiteny grika dia Μανασσῆς / Manassês na Manassís ary amin' ny fiteny latina dia Manasses.
Resahina ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly izy sady voalaza ao fa nitondra tena tahaka ny adala araka ny Boky faharoan' ny Mpanjaka (2Mpanj. 21.1-18). Lasa babo izy dia nentina tany Babilôna ka tany izy no nibebaka sy nitalaho tamin' Andriamanitra mba havela heloka. Taorian' izany dia tafaverina teo amin' ny fanjakana indray izy araka ny Boky faharoan' ny Tantara (2Tant. 33.11-13 sy 18-19).
Boky amin' ny anaranyHanova
Misy boky apôkrifa na pseodepigrafan' ny Baiboly izay mitondra ny anarany, dia ny Vavak' i Manase, izay mirakitra ny vavaka sy ny fiaiken-keloka nataon'ilay mpanjaka nandritra ny figadrany tany Babilôna.
Fanjakan' i Israely (misaraka)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Manase&oldid=1042041"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 12:14
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 12:14 ity pejy ity.